Josoe 23 - Ny Baiboly
Josoe toko 23
Lahatenin'i Josoe tamin'ny mpifehy ny vahoaka.
1Efa ela no nanomezan'ny Tompo fitsaharana an'Israely, sy nanafahany azy tamin'ny fahavalony rehetra amin'ny manodidina, ka efa zoky olona sy nandroso fahanterana Josoe. 2Koa nantsoin'i Josoe avokoa Israely rehetra, ny loholony, ny lehilahy, ny mpitsara azy, ary ny manamboninahiny, ka hoy izy taminy:
Efa zoky olona sy mandroso fahanterana aho. 3Efa hitanareo izay rehetra nataon'ny Tompo Andriamanitrareo tamin'ny firenena rehetra teo anoloanareo, fa Iaveh Andriamanitrareo no niady ho anareo. 4Indro efa nozaraiko taminareo mba ho lova ho an'ny fokonareo, tamin'ny filokana, ireo firenena izay mbola eo ihany sy ireo rehetra efa nofongorako hatrany Jordany ka hatrany amin'ny ranomasin-dehibe any andrefana any. 5Iaveh Andriamanitrareo hampandositra ireny eo anoloanareo sy handroaka azy eo anoloanareo, ka ho lasanareo ny taniny, araka ny efa voalazan'ny Tompo Andriamanitrareo taminareo. 6Koa misehoa ho be herim-po amin'ny fitandremana amam-panarahana izay rehetra eo amin'ny bokin'ny lalàn'i Moizy, fa aza mivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia; 7aza miharo amin'ireo firenena izay mbola tavela eo aminareo, aza miantso ny anaran'izay andriamanitr'ireo na mianiana amin'ny anarany, na manompo an'ireny na miankohoka eo anoloan'ireny hianareo, 8fa miraiketa amin'ny Tompo Andriamanitrareo, araka ny nataonareo mandraka androany. 9Firenena lehibe sy mahery no noroahin'ny Tompo teo anoloanareo, ka tsy nisy olona nahatoha anareo mandrak'androany. 10Iray taminareo no nanenjika arivo fa Iaveh Andriamanitrareo no niady ho anareo, araka ny efa voalazany taminareo. 11Koa mitandrema tena hianareo hitiavanareo an'ny Tompo Andriamanitrareo. 12Fa raha mivily hianareo, ka miray amin'ireo firenena sisa tafatoetra eo aminareo sy mifanambady amin'izy ireo, hianareo miharo aminy izy miharo aminareo, 13dia fantaro tsara fa tsy hotohizan'ny Tompo Andriamanitrareo ny fandroahana ireo firenena ireo eo anoloanareo; ka ho harato amam-pandrika ho anareo ireo, ary ho rotsakazo amin'ny lanivoanareo, sy ho tsilo amin'ny masonareo, mandra-pahalany ritra anareo tsy ho eo amin'ity tany soa, nomen'ny Tompo Andriamanitrareo anareo ity.
14Ary inty aho, efa handeha amin'ny falehan'ny tany rehetra, koa fantaro amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra, fa tsy misy foana akory na dia iray aza, ny teny rehetra nolazain'ny Tompo ny aminareo; tanteraka avokoa ho anareo izany, tsy nisy latsaka na dia iray aza. 15Koa toy ny nahatanterahan'ny teny soa rehetra nolazain'ny Tompo Andriamanitrareo taminareo no hanatanterahan'ny Tompo eo aminareo koa ny teny fandrahonana rehetra mandra-paharinganareo, tsy ho amin'ity tany soa nomen'ny Tompo Andriamanitrareo anareo. 16Raha mandika ny faneken'ny Tompo Andriamanitrareo izay nandidiany anareo hianareo ka mandeha manompo andriamani-kafa sy miankohoka eo anoloan'ireny dia hirehitra aminareo ny fahatezeran'ny Tompo, ka vetivety dia ho lany ringana tsy ho eo amin'ny tany soa nomeny anareo hianareo. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2130 seconds